Sina Vondron'orinasa fotsy madio no nilatsaka tamin'ny fanasana plastika fanasan-daboara feno doka 600mm sy ozinina mpamatsy | Belle
Sehatra fotsy madio no mitete amin'ny famafana plastika fanasana fantsom-boaloboka 600mm
Logo namboarina (Min. Order: 100 Pieces)
Fonosana namboarina (Min. Order: 100 Pieces)
Fanamboarana sary (Min. Order: 100 Pieces)
Warranty: 5 taona, 5 taona Serivisy aorian'ny fivarotana: Fanohanana ara-teknika an-tserasera
Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa: famolavolana Sary Fampiharana: Hotely, efitrano fandroana
Anaran'ny marika: Belle Model Model: 104A
Tray endrika: Square Anaran'ny vokatra: Sehatra fotsy madio no mitete amin'ny famafana plastika fanasana fantsom-boaloboka 600mm
Habe: 700/800/900 Endrika: Square
Function: Fandroana trano Endri-javatra: Sariaka amin'ny tontolo iainana
Loko: Fotsy ,, manga, ivoara, mavokely ect. Style: tsotra
Tray Material: Akrilika
7000 Piece / Pieces isam-bolana Ny sehatr'asa fotsy madio dia milatsaka amin'ny famafana plastika 600mm vilia fandroana lalina
Fonosana ho an'ny sehatry ny fotsy madio mitete amin'ny plastika manasa fantsom-boaloboka 600mm
Fonosana anatiny: sarimihetsika fiarovana + sarona fiarovana + sarimihetsika bubble
Fonosana ivelany: baoritra
Qty amin'ny 4oHQ: 2500Pcs
Tandremo ny fametrahana vilia fanasan-damba
Ny fametrahana ny kovetabe fanasana tanana dia olana tsy maintsy dinihin'ny fianakaviana tsirairay. Ireo koveta fanasana tanana isan-karazany dia mahay koa. Azonao atao ny manontany an'ity manaraka ity alohan'ny hametrahana vilia fanasana tanana mba hahalalana ny fomba fametrahana azy ireo amin'ny fantson-tànana fanasana tanana. Ka inona ny fepetra raisina amin'ny fametrahana vilia fanasan-damba?
Fomba fametrahana ny kovetabe fanasana
1. Fiomanana. Hetezo aloha ny sary fanokafana ny fametrahana ny lovia eo ambony latabatra, ary avy eo ampitahao amin'ny habe ara-batana amin'ilay lovia ambony latabatra araka io habe io, ary zahao indray raha mety eo anelanelan'ny kovetabe fanasana sy ny lovia eo ambony latabatra.
2. Araho ny tsipika fanokafana. Ny toerana hametrahana faucet dia hotehirizina ao ambanin'ny latabatra marbra, ary ny fantson-drano sy ny valopy zoro miditra dia hapetraka amin'ny dingana manaraka. Azonao atao ny mandika ny sary fanokafana amin'ny latabatra marbra, ary avy eo mampiasa penina hanarahana ny tsipika fanokafana ampiasaina rehefa manapaka ny latabatra.
3. Hetezo ny fisokafana. Aorian'ny nanoratana ny tsipika fanokafana marbra, azonao atao ny manokatra ny lavaka. Sokafy ny lavaka ao anatin'ny fisokafan'ny fanapahana, ary avy eo polaso ​​ny sisiny voapaika ao anaty ny tsipika fanapahana nalaina.
4. Mametraka koveta fanasana. Rehefa vita ny zavatra rehetra dia azo apetraka ny countertop marbra, ary avy eo ny plastika fanasana dia azo apetraka arakaraka ny toerana sisa tavela mialoha.
1. Zava-dehibe ny fisafidianana ny karazana kovetabe fanasana tanana. Amin'ny ankapobeny, ny koveta fanasana tanana dia mizara ho birao sy tsy miankina. Ny koveta fanasana tanana amin'ny birao dia hipetraka latabatra iray farafahakeliny farafahakeliny, ary ny toiletries sasany dia azo apetraka eo amin'ny lovia fanasana tanana eo amin'ny birao. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny karazana tsy miankina dia ny manarona faritra kely iray, izay tena mety amin'ny trano fidiovana misy toerana kely, saingy tsy mora ny mitahiry zavatra.
2. Ny haavon'ny kovetabe fanasana dia tokony ho faritana ihany koa. Amin'ny ankapobeny, ny kovetabe fanasana dia tsy tokony ho fohy, raha tsy izany dia mety ampiasaina, ary ho reraka be ianao raha miondrika. Notsiahivin'ny manam-pahaizana fa ny haavon'ny koveta fanasan-damba ampiasaina ao an-tranonay dia manodidina ny 80cm eo ho eo, saingy azo faritana ihany koa amin'ny fandinihana ny haavon'ny fianakavianay hahatratrarana ny vokatra tsara ampiasaina.
3. Mila faritana ihany koa ny halalin'ny tavy fanasan-damba, raha tsy izany dia mora ny mahatsapa ny fiparitahan'ny rano amin'ny vatana rehefa ampiasaina, ka tokony hitovy mivantana amin'ny halehiben'ny rano amin'ny faucet napetraka eo amboniny ny halalin'ny mpitondra. Aza asiana faucet misy rano mikoriana mafy ao amin'ny tavy fivoahana.
Teo aloha: trano fandroana seramika maoderina iray fidiovana roa
Manaraka: fivarotana mafana fandroana gloss vita amin'ny fandroana acrylic freestanding
Fandroana akrilika mitete ao
Fandroana fitetezana rano
Tafidina ao anaty fandroana whirlpool
seramika maoderina fanasan-damba iray tapa-flush roa ...
2021 mpanamboatra kalitao avo lenta ...
Efitra fandroana mihosin-varavarana mihodina amin'ny jiro ambony a ...